सानो (१०/११ वर्षको) उमेरमा दाइहरुको पछि लागेर २०३५–०३६ सालको आन्दोलनमा म पनि सहभमागी भएको थिए । आन्दोलनमा स्कुलका ठूला दाइहरुले हामी चार कक्षाका विद्यार्थीहरुलाई पनि साथै लिएर दिनहुँजसो जुलस गर्थे । मलाई याद आउँछ, याद किन नआउने आफैले भाग लिएको कार्यक्रमको । म पढ्ने झुवानी स्कुलदेखि राजमार्गको टाँडीबजार करिव ६–७ कि.मि. सम्म जुलुस प्रदर्शन गर्दै पुग्थ्यौं । टाँडीबजारमा उफ्री उफ्री “पञ्चायती व्यवस्था–मुर्दावाद’को नारा लगाउँथ्यौं । अनि त्यहीं नेपाल मा.वि.मा वा सडकमै सभा गथ्यौं । २०३६ सालको अन्तिमतिर नारायणगढमा बुहदलको पक्षमा जनमत सिर्जनागर्ने ठूलो प्रदर्शन र जनसभामा नेता वी.पी. कोइराला आउनु भएको थियो । त्यहाँ पनि भाग लिएको थिएँ मैले ।
पछि २०४१ सालमा शिक्षक आन्दोलनका क्रममा पुसको अन्तिम हप्ता २ दिने नेपालबन्द थियो । नेपाल बन्द सफलपार्न गुरुहरुलाई मद्दत गर्न हामी विद्यार्थीहरु पनि गएका थियौं । टाँडीबजारमा हामी बन्दकर्तालाई पुलिसले आक्रमण ग-यो । मैले पनि २/३ लाठ्ठी (कटबाँसको ठूलो लाठो) भेटेको थिएँ । तर गिरफ्तार भने भएको थिइन ।
यस अघि कहिल्यै गिरफ्तार नपरेकोले यो नै मेरो पहिलो अनुभव थियो । मलाई एकै पटक खुशी र दुःख लाग्यो । दुखी यस अर्थमा कि ‘जुलुस निकाल्न पाएनौं ती मेघालयबाट लखेटिएका नेपालीहरुको समस्या ज्यूका त्युँ रहने भो’भन्ने कारण । अर्को तर्फ जेलमा रहेका पञ्चायत विरोधी कम्युनिष्ट र कांग्रेसका नेता कर्याकर्ता प्रति हाम्रो अगाध स्नेह र सम्मान थियो । त्यसैले जेल जाने कुरामा मलाई पटक्कै दुःख थिएन । मैले यस मानेमा खुशी मानेको थिएँ कि म यो देश र जनताको निम्ति लड्दै थिएँ, जेल जाँदै थिएँ ।